မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့…မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိခြင်း… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« OIC ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်အရေးအဆိုပြုချက် ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီလက်ခံအတည်ပြု
BBC: Dr Zarni’s critique of Myanmar elections and Commander in Chief »
မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့…မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိခြင်း…
မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့…မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မွတ်စလင်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို…နှိုင်းဆကြည့်ရင်…မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အခြေအနေက… အဆပေါင်း…သန်းနဲ့ချီပြီး…အခြေအနေ ကောင်းမွန်လှပါတယ်…
မလေးရှား အစိုးရနဲ့…မလေးရဲတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့…ကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းမှုကြောင့်…အခြေအနေကို ချက်ချင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး…မလိုလားတဲ့ပြသနာတွေ ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်တော့ဘဲ… တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…အပြစ်ရှိသူတွေကို …ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ…အမြန်ဆုံးအရေးယူ…ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…
ပြသနာဖြစ်တဲ့အခြေအနေက…၂၀၁၃ခုနှစ်…မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က…မြန်မာနိုင်ငံ…မိတ္ထီလာမြို့မှာ… ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့…ရွှေဆိုင်ပြသနာနဲ့ ဘာမှ မထူးခြားခဲ့ပါဘူး…ပုံသဏ္ဍာန်အတော် တူပါတယ်…
မြန်မာပြည်မှာတော့…ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် မွတ်စလင်နဲ့..ရွှေရောင်းလာသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ ၂ဦး ၂ဖက်ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့…ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြသနာလေးကို…ပုံကြီးချဲ့ပြီး…ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်သမား တွေနဲ့…ဘုန်းကြီးတွေ…ဝင်ရောက် စီးနင်း..ရမ်းကား ဖျက်ဆီးလိုက် တာကနေ…ပြသနာ စဖြစ်တဲ့ ရွှေဆိုင်ကို လုယက်ဖျက်ဆီးယုံတင်မက…ရွှေဆိုင် ငှားရမ်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့…တိုက် အဆောက်အဦ ကိုလည်း…ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပါတယ်…အဲ့ဒီအပြင် …ပြသနာနဲ့…ဘယ်လိုမှ မသက်ဆိုင်တဲ့…မွတ်စ လင်တွေရဲ့…ဆိုင်တွေ…အိမ်တွေ…ဗလီတွေ ကိုပါ…ဆက်လက်ပြီး…လုယက် တိုက်ခိုက်…ဖျက်ဆီး… မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်…
အဲ့ဒီနောက်…ဗလီကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားရင်း…အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုထဲမှာ..သေဆုံးခဲ့တဲ့… သဲတောမြို့က…အကြမ်းဖက်ဘုန်းကြီးတပါး…သေဆုံးခဲ့ရမှုကို…အကြောင်းပြုပြီး…အစ္စလာမ်ဘာသာ ရေးစာသင်ကျောင်းတခုက…ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းသားတွေနဲ့…ဆရာတွေအပါအဝင်…လူ သုံးဒါဇင် လောက်ကို…ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်…အဲ့ဒီအထဲမှာ…အချို့ဆိုရင်…အရှင်လတ် လတ်…မီးရှို့အသတ်ခံခဲ့ကြရတာပါ….
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့…မွတ်စလင်တွေရဲ့ အိမ်ယာ…ဆိုင်…စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ…အပါအဝင်…တမြို့ လုံးမှာရှိတဲ့…ဗလီပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့…ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအားလုံးကို လုယက် ဖျက်ဆီး မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်…
ထောင်နဲ့ချီတဲ့…မွတ်စလင်ပိုင်အိမ်တွေ…ဆိုင်တွေ…စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ…အလုအယက်ခံခဲ့ရပြီး… ဖျက်ဆီး မီးရှို့ ခံခဲ့ရပါတယ်…
မိတ္ထီလာမြို့က မွတ်စလင်တိုင်းလိုလိုဟာအလုပ်တွေပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်…စီးပွားတွေပျက်ခဲ့ကြပါတယ်… နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာမြင့်လာတာတောင်…စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး… ဈေးထဲမှာဆိုင်ခန်းရှိတဲ့သူတွေ…ဆိုင်ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး…အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ အမြတ်ထုတ် သိမ်းဆည်းမှုကြောင့်…မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေ ဆုံရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်…
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာ…တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်…အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ…လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ…အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေ… ရှေ့မှာတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး…မွတ်စလင်တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးခြင်းတွေကို… တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေ ကိုယ်တိုင်က…လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ…
တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရအဖွဲဝင်တွေနဲ့…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက…အကြမ်းဖက်သမားတွေကို…လုံးဝ အရေးမယူ ခဲ့ဘဲ…မွတ်စလင်တွေကိုတော့…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်တဲ့အတွက်…မိမိအိမ်ကို မိမိ ကာကွယ် ဖို့ အားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်…မိသားစုကို..ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်…ဗလီတွေကို အကာ အကွယ်ပေးဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်…မတရားဖမ်းဆီခဲ့ပြီး…ပုဒ်မ မျိုးစုံတတ် တရားစွဲကာ.. မမှန်မကန်တဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့…နှစ်ရှည်လများ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်…
မိတ္ထီလာပြသနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်…အမုန်းတရားဟောကြားမှု…အမုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေကို…အစိုးရရဲ့ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်နဲ့…အကြီးအကျယ် လုပ်ခဲ့ကြပြီး…ရန်မီးပွားမှုတွေ…တနိုင်ငံလုံး ပြန့်စေခဲ့ပါတယ် ပြသနာဖြစ်ပြီးတာ ၂နှစ် ကျော်ကြာလာတဲ့ ယနေ့အချိန်အထိ…မြန်မာနိုင်ငံထဲက အစ္စလာမ် ဘာသာ ဝင်တွေဟာ…ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရတုန်း…ရန်အရှာခံနေရတုန်းဘဲရှိနေပါသေးတယ်…
မိတ္ထီလာ ရွှေဆိုင်လိုမျိုး ပြသနာ စဖြစ်လိုက်တာနဲ့…နေ့ခြင်းပြီး…အချိန်နဲ့တပြေးညီ…ဥပဒေနဲ့ အညီ ဖြေရှင်းလိုက်ကြတယ်…
မလေးရှား အစိုးရနဲ့…မလေးရဲတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့…ကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းမှုကြောင့်…အခြေအနေကို ချက်ချင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး… တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ် အပြစ်ရှိသူတွေကို …ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ…အမြန်ဆုံးအရေးယူ…ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်…
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ…တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ…အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ…ရာထူးကြီးကြီး ရယူထားသူတွေ ရှိနေကြပါတယ်…ရဲတပ်ဖွဲထဲမှာရော…စစ်တပ်ထဲမှာရော ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီအခြေအနေကိုက…မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်တွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့…တခြားစီပါ…
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့…အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ…မွတ်စလင် တယောက်မှမရှိပါဘူး…မွတ်စလင် ဝန်ကြီး တယောက်မှ မရှိပါဘူး…ဒု ဝန်ကြီး မွတ်စလင် မရှိပါဘူး…ညွှန်ချုပ်…ညွှန်ကြားရေးမှူး…အစရှိတဲ့ အဆင့်မြင့် အရာရှိတွေထဲမှာ…မွတ်စလင်တယောက်မှ မပါရှိပါဘူး…စစ်တပ်ထဲမှာ…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အထဲမှာ…အောက်ခြေအဆင့် တဦးစ နှစ်ဦးစ ကလွဲရင်…မွတ်စလင် မရှိပါဘူး….
၆၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲမှာ…ရိုဟင်ဂျာ အမတ် ၃ယောက်ဘဲ..(ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိဘဲ)…ရှိနေပါတယ်…ဒါတောင်…ရိုဟင်ဂျာအများစုနေတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ…ရိုဟင်ဂျာကလွဲပြီး… တခြား ဘယ်သူ့ကိုမှ…ရွေးကောက်တင်မြှောက်လို့…မရလို့ပါ…
မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာ…တရုတ်လူမျိုးတွေရရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့ ဆိုရင်…အဆပေါင်း သိန်းသန်းချီ ပြီး ကွာနေပါတယ်….
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်…မလေးရှား အစိုးရနဲ့…မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ…ခင်ဗျား…
လူကြီးမင်းတို့ဟာ…အလွန်အင်မတန် ဆိုးဝါး အောက်တန်းကျလှတဲ့…မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့…မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မတူဘဲ…တိုင်းပြည်ကို ကောင်းမွန်လှစွာသော…စေတနာတွေနဲ့….တိုင်းပြည် ကို…တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အုပ်ချုပ် လုပ်ကိုင် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခင်ဗျား…..
This entry was posted on July 18, 2015 at 10:45 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.